Dabangg 3 vs Brahmastra: Salman Khan oo diyaar u ah inuu Karan Johar meel iska saaro! – Filimside.net
Dabangg 3 vs Brahmastra: Salman Khan oo diyaar u ah inuu Karan Johar meel iska saaro!
Filim sameeyaha iyo soo saaraha caanka ah Karan Johar ayaa horey ugu dhawaaqay in filimka uu maal galinaayo Sooryavanshi ee Superstar Akshay Kumar hogaamiyaha ka yahay sidoo kalena Rohit Shetty Director ka yahay la daawan doono Eid 2020.
Arintan Mega Star Salman Khan ma uusan soo dhaweynin madaama uu isaga rabay in Eid 2020 uu calaameesto loona saaro filimka Sanjay Leela Bhansali uu u sameenayo sidoo kalena Akshay Kumar iyo Karan Johar waxay sheegeen inaysan muhiim ahayn in Salman weydiistaan Eid 2020 madaama taariikhdaas firaaqo tahay iyagana doorteen qofkii kula tartamaayana ay soo dhaweenayaan.
Haddaba Salman Khan oo ka jawaab celinaayo arinkan isaga oo Dubai ku sugan una joogo bandhig faneedkiisa hirgalay Dabangg Tour wuxuu shaaca ka qaaday in taxanihiisa hirgalay Dabangg 3 la daawan doono December todobaadka ciida masiixiga ama todobaadka ka dambeeyo.
Salman wuxuu yiri “Dabangg 3 shaqadiisa waxay bilaabaneysaa 1 April waxaana la daawan doonaa Christmas 2019 ama todobaadka dambeeyo feestada ciida masiixiga.”
Salman Khan hadalkiisa waxaa loo fahmay inuu duulaan ku yahay Karan Johar filimkiisa weyn Brahmastra oo ay wada jilayaan Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor iyo Alia Bhatt horeyna u doorteen in Christmas 2019 la daawado waxaana muuqato in dagaal cusub uu Salman iyo Karan Johar ka dhex bilaaban rabo.
Karan Johar arintan kama uusan jawaab celinin balse waa hubaal in la wada hadli doono waayo Brahmastra iyo Dabangg 3 waa labo filim oo siweyn loo wada sugaayo lacago xoogana xambaarsan marka suurta gal ma noqon doonto inay tiyaatarada ku hardamaan balse waa macquul in hal todobaad daawashadooda xitaa u dhaxeyso inkastoo midaas xitaa sababi karto in ganacsiga labadan filim saameyn isku yeeshaan.
Waxaa Aqrisay 454
waxaan aad uga xumahay inaa uquuri waydeen ninka filmka hogaaminaya magaciisa inaa sheegi waydaan xaqiiqda waxay tahay salman inuu ranbir necebyahay ninka uu boxoffice ka kula dagaalamaayo waa isaga idinkuna karan baad ku soo qorteen inta media ah ee bollywood ka kafaalota kuli waxay soo qorayaan salman vs ranbir idinkuna xitaa waad uquuri waydeen sorry